Daawo: Marines Mareykanka oo tababar gaar ah siisay ciidamo Soomaaliya loo soo wado oo ka socda dalka…. – idalenews.com
Daawo: Marines Mareykanka oo tababar gaar ah siisay ciidamo Soomaaliya loo soo wado oo ka socda dalka….
Saraakiil ka socotay dowladda Mareykanka ayaa gudaha dalka Uganda tababar gaar ah ugu soo gabagabeysay ciidamo ay leeyihiin dowladda Yuugandha oo la doonayo in loo soo qaado dalka Soomaaliya dhawaan, kuwaas oo qeyb ka noqonaya howgalka AMISOM ee Soomaaliya ee Midowga Afrika ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya.
Sida warku sheegayo ciidamadani oo gaaraya dhowr boqol ayaa la siiyey tababar gaar, waxaana loogu talagalay inay fuliyaan howgalada qarsoodiga ah iyo weerarada meelaha keynta ah, sidoo kalena waxaa loo gu talagalay inay galaan goobaha ku adkaada ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, ciidamada oo ah ciidamo u howgala sida boolisiyo melletaaro ayaa la siiyey intii tababarku u socday sida loo weerarayo goobaha la geliwaayo, howgalda sirta ah ee qarsoodiga loo fuliyo iyo sida looga dagaalamo goobaha qatarta ah, waxaana la sheegay in ciidamadaasi oo tababarkii loo soo xiray dhawaan loo soo qaadi doono gudaha dalka Soomaaliya si ay uga howgalaan.
Halkaan ka daawo qaabka Tababarka Ciidanka Marines Mareykanka u siiyaan ciidanka Uganda
Ciidamadan ayaan la ogeyn inay qeyb ka yihiin ciidamadii horey u joogay Soomaaliya ee ka socday dalka Yugandha iyo inay yihiin kuwo cusub, waxaana ay ku soo aadayaan iyadoo shirkii dhawaan ka dhacay Yugandha ee ay yeesheen dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya lagu go’aamiyey in tirada ciidamada AMISOM ee joogta Soomaaliya la gaarsiiyo illaa 22’000 labaatan kun oo askari.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidamadan loogu talogalay inay waariyeeyaan goobaha muhiimka ah ee ay ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha, Dekadda weyn ee Muqdisho iyo xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya iyo madaxda dowladda Soomaaliya iyo taliska guud ee AMISOM, mana jiryo wax war ah oo ka soo baxay dowladaha Soomaaliya iyo Yugandha oo ku aadan qaabka ay u howlgelidoonaan ciidamadaasi marka ay yimaadaan magaalada Muqdisho